I-IBC 2019: Ukuphayona Okubukwayo Kwezindatshana Zamagazini Vizrt, NewTek kanye ne-UN Unite - I-NAB Show News ngu-Broadcast Beat, Umsakazi Osemthethweni we-NAB Show - I-NAB Khombisa
Ikhaya » Ukudalwa kokuqukethwe » I-IBC 2019: Ukuphayona Ama-TV Vizrt, i-NewTek ne-NDI Unite
I-IBC 2019: Ukuphayona Ama-TV Vizrt, i-NewTek ne-NDI Unite
I-Bergen, eNorway - Vizrt, I-NewTek™ ne-NDI® ifika ku-IBC 2019 (ime 7.B01) ngaphansi kohlobo lwesambulela Vizrt Iqembu - ukuhlanganisa izinhlobo ezintathu zokuphamba ezibukwayo zezindaba eziphayona ngaphansi kwenjongo eyodwa - ukusiza amakhasimende ukuletha izindaba eziningi, atshelwe kangcono.
The Vizrt Iqembu lemikhiqizo lizonika amakhasimende ithuba lokukwazi ukuqondisisa kwezindaba ezibonakalayo futhi andise ubuciko bawo. Ngokubambisana, amabhlogo ahlinzeka ngokufinyelela kupulatifomu ephelele kunazo zonke yezixazululo zokubuka izindaba ezisuselwe ku-IP ezimakethe, ezinikeza zonke izinhlobo zenhlangano.
Ngesikhathi esifanayo, I-NewTek futhi Vizrt bazokhulisa izindlela zabo ezikhona zokumaketha futhi bazohlala bezinikele kwizisekelo zamakhasimende abo.
Vizrt zizoqhubeka nokwenza futhi zilolonge uhlelo lwe-ecosystem olunikeza amandla angaphezulu okuxoxa izindaba ezindabeni kwezokusakaza, amabhizinisi kanye nabezindaba ezintsha. Lokhu kwenziwa kutholakale kumakhasimende ngochwepheshe bamaqembu endawo abahlinzeki ngezinsizakalo zabasebenzi abaqeqeshiwe, abaphathi bama-akhawunti nabaphathi bempumelelo yamakhasimende.
I-NewTek uzoqhubeka ngokunikeza wonke umuntu oxoxa izindaba ngezwi ngevidiyo ngenethiwekhi yakhe yomthengisi eqinile. I-NewTek izibophezele ekusebenzeni nabalingani bayo besiteshi ukufeza izidingo zomsebenzisi wokugcina futhi indlela yomkhiqizo emakethe izoba yi-100% ngesiteshi sayo esingaqondile.
I-NDI, indabuko yedijithali yomdabu, esekwe nge-IP, nokuxhumeka kwevidiyo manje izobekwa ngaphansi komkhiqizo wesambulela we Vizrt Iqembu. Lokhu kuzonika amandla umkhiqizo we-NDI ngesilinganiso esikhulayo sokugxila nokuzimela, ukukunika amandla wokulethela inani eliningi kulo I-NewTek futhi Vizrt izixazululo zamakhasimende, kanye nalezo zabalingani beqembu lesithathu.
UMichael Hallen, oyi-CEO, uphawule: “Manje sesisethubeni lokusebenzisa amakhono amasha okuphayona kanye nobunjiniyela be Vizrt, I-NewTek kanye ne-NDI ukuze kusizakale wonke amakhasimende ethu. Ngijabule kakhulu ukusiza amakhasimende ethu ukuba afinyelele izinhloso zawo ngokufaka impahla yethu enobuhlakani obunamandla, inethiwekhi yesiteshi esibalulekile kanye nabaholi abacabangi bezimboni. Lokhu kuzosiza ekuthunyweni kwethu, okuvele nje ukuthi: ezinye izindaba, zitshelwa kangcono. ”
The Vizrt iqembu lemikhiqizo lisekelwa ngabasebenzi be700 emahhovisi omhlaba we-30, nokubalwa i-CNN, Fox, BBC, Mediacorp, New York Giants, SBS, Tencent, Globosat, ne-MTV phakathi kwamakhasimende ayo.
I-California Streamin ' - Disemba 3, 2019
Izinkomba ze-IBC2019 - Okthoba 5, 2019
Injini yokusakaza Ukusakaza Ubuchwepheshe I-Graham Chapman i-Prmoted to Editor umbhalo we-subtitling, i-Digital Nirvana, ukuqapha imidiya, i-IBC Umlingisi wevidiyo	2019-09-03
Ngaphambilini: I-LYNX Technik Imemezela i-8K SDI Fiber Converter e-IBC 2019
Olandelayo: CUESCRIPT TO DEBUT SMPTE 2110 IP CONNIVIVIVIT UMLAYISI E-IBC2019